Joogitaankeena soo socda ee Austria iyo Italy By Rail waa Venice, Marka aad gaarto Italy, aad dalka reer gorgeousness galay! Hoyga in Venice waa qaali, si ay u shaqayso oo aad raalli iga haddii aad deggan tahay hal maalin oo kaliya. Ha ku dhumin waqti aad laakiinse waxaad u samaysaa sida ugu badan ee suurto gal ah in muddo gaaban. A gondola doon safar yahay waajib ah! FYI, waxa ay sidoo kale waa mid aad u qaali ah. Filo in ay bixiyaan oo ku saabsan 80 EUR safar gondola 30-daqiiqo ah oo ku saabsan 120 EUR for a 45 hal daqiiqo. Markaasuu, tegayaa hubi Ponte di Rialto - mid ka mid ah ugu buundooyinka caan in Venice. Waxay u dhexeeysa Canal Grand ah, oo waxay ku dhow yahay inuu di Ponte ku Rialto. On jidka aad ku saldhiga tareenka, Koosaar ee stunningly qurux Piazza San Marco, aka Square Saint Mark ayaa.
On aad Austria iyo Italy by safar rail, aad noqon doonaa in ay tahay joojiyaan in Florence. maalin ama laba ee magaalada this buuxiyey oo la taariikhiga ah, farshaxanimo, iyo ahmiyada diineed waa sixir saafi ah. The wax ugu horeysay si aad u aragto yihiin The Basilica iyo Biyac of Santa Maria Novella. Waxay ammaanta badan oo u dhow xarunta tareenada yihiin! Waxa kale oo jira Piazza ah oo qurux badan waxaa in ficil ahaan had iyo jeer ka buuxsamay dadka. Markaasuu, guurto gal weyn Santa Maria del Fiore iyo qubbad wayn. Fiiri Basilica ee Santa Croce iyo Basilica di San Lorenzo iyo Medici Chapels sidoo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cities-austria-italy-rail/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)